Global Voices teny Malagasy · 23 Oktobra 2012
Tantara tamin'ny 23 Oktobra 2012
Azia Atsimo23 Oktobra 2012
Azia Atsinanana23 Oktobra 2012
Libya: Tena Namoy ny Ainy Marina ve i Khamis Gaddafi ?
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana23 Oktobra 2012
Namoy ny ainy ve i Khamis Gaddafi? Tena namoy ny ainy tokoa hono. Mbola mitohy ny fametraham-panontaniana tao anatin'izay herintaona katroka nirodànan'ny fitondran'ny rainy mpanao didy jadona Muammar Al Gaddafi izay. Mpanao gazety Mary Fitzgerald nisioka hoe: @MaryFitzgeraldIT: Taorian'ny andron'ny vazivazy, nanambara ny Kongresy nasionaly spox #Libya tao amin'ny fahitalavitra ao an-toerana fa...
India: Mitohy ny Fifandirana Manodidina ilay Toby Nokleary Kudankulam
Tao anatin'ny hetsi-panoherana (jereo ny lahatsoratra Global Voices) no nanombohan'ny tetikasa Angovo Atomika ao Koodankulam, ao Tirunelveli, distrikan'ny firenena Indiana Atsimo,Tamil Nadu tamin'ny volana lasa teo. Nanomboka namokatra herinaratra ny orinasa saingy miharatsy hatrany ny toe-draharaha satria mbola mitohy ny fisamborana olona ary mbola maro ireo mpanao fihetsiketsehana any am-ponja. Nanamarika ny antso ho amin'ny...